Gaas & wakiilka UNSOM oo qalbi dejin ugu tegay shaqaalaha UNICEF ee Garowe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 27-4-2015 booqday xafiisyada Hay’adaha UNICEF iyo UNSOM ee magaalada Garoowe ee caasimadda Dawladda Puntland.
Madaxweynaha ayaa dhammaan madaxda iyo howlwadeenada hay’addaasi u sheegay in xukuumadda uu hoggaaminayo ay ka go’antahay adkeynta ammaankooda , haatana meel fiican ay marayso baaritaanka dawladdu ay ku hayso weererkaii argagaxisnimo ee ka dhacay Garoowe.
Mrs. Mariana Hattinge oo ah wakiilka Hay’adda UNICEF ee Puntland ayaa cadaysay inay sii wadayaan howlaha muhiim ka ah ee ay u hayaan shacabka reer Puntland, iyadoona balan qaaday inay sii laba jibaarayaan howlahaasi, wax saameyn ahna uusan ku yeelan doonin falkii foosha xumaa ee shaqaalahoodu lagu beegsaday .
Wakiilka hay’adda UNSOM ee Puntland Omar Abuudi ayaa Madaxweynaha uga mahadceliyey booqashada uu ugu yimi , waxaana uu balan qaaday in shaqooyinka ay u hayaan shacabka reer Puntland sii wadi doonaan islamar’ahaantaana loo hakanayn fal argagixisnimo.
Puntland ayaa UN-ka ayaan weli wax warbixin buuxda ah kasoo saarin qarax lala beegsaday gaari ay la socdeen shaqaalaha UNICEF oo ay ku dhinteen ilaa todobo qof oo isugu jiray Soomaali iyo ajanabi.